LibreELEC 8.2.2 "Krypton" yaburitswa nerutsigiro rwe3D mafirimu | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Kugoverwa, Multimedia
Zviri pano LibreELEC 8.2.2 codenamed Krypton uye inouya nekunakidzwa kunatsiridza kwatichazokurukura iye zvino. Kana iwe uchiri kusaziva iyo LibreELEC chirongwa, taura kuti iri Linux-based inoshanda sisitimu yekumisikidza yakazara multimedia nzvimbo yekombuta yako kana yako Raspberry Pi uye uine yakachipa uye inopfuura yakadzikama midhiya nzvimbo. Icho chirevo cheLibre Yakaputirwa Linux Varaidzo Center uye inoshandisa iro rakakurumbira Kodi. Kana iwe uchifarira iyi sarudzo unogona kuiwana pa iyo yepamutemo webhusaiti yepurojekiti.
Iyo nyowani LibreELEC 8.2.2 Krypton yekugadzirisa inogadzirisa chikanganiso chakakomba kubva mushanduro dzakapfuura, saka zvingave zvinonakidza kuti uzvigadzirise nekukasira kana uchitova nehurongwa uine vhezheni yapfuura. Uku ndiko kuburitswa kwechipiri kwekuchengetedza kwebazi re8.2 Krypton uye kwakavakirwa pane kodhi kubva Kodi 17 Krypton, saka izita rayo. Iyo inouya chete mwedzi mushure meiyo vhezheni 8.2.1 iyo yaive zvakare nekumwe kugadzirisa uye zviputi zvakagadziriswa, asi mune iyi vhezheni bug iri muffmpeg backend iyo yakaita kuti isashande nemazvo yakagadziriswa.
Kunyanya kunatsiridza ffmpeg multimedia backend izvo zvakatadzisa vashandisi kunakidzwa nezviri mukati me 3d mafirimu. Saka ikozvino iwe unogona kuona iyi mhando yeatatu-mativi emafirimu pasina dambudziko. Saka kana iwe ukatambura nedambudziko iro, iwe unogona ikozvino kurigadzirisa neiyi nyowani yekuvandudza yakaburitswa. Vagadziri vacho vanokurudzira kuti avo vane vhezheni yapfuura vashandise nzira yemanyorerwo yekuvandudza iyo LibreELEC system kuti vawane iyi yekuvandudza, iyo inowanikwa mukugadzirisa plug-in yeiyo system.
Asi izvo hazvisi izvo chete kugadzirisa kwakawedzerwa, semazuva ese, kumwe kugadziriswa kana shanduko zvinogara zvakafukidza zvimwe zvese nekuda kwekukosha kwavo, uye mune iyi nyaya isu tine dzimwe shanduko diki nerutsigiro rwe RF kure kudzora wechipiri-chizvarwa OSMC, nezvimwe. Kune rimwe divi, mapakeji akasanganisirwa haana kuvandudzwa kana iwo madhiraivha eiyi LibreELEC 8.2.2 vhezheni yakagadziridzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » LibreELEC 8.2.2 "Krypton" yakaburitswa nerutsigiro rwemafirimu e3D
Inoita zvakafanana neKo uye iwe unogona kuitsiva muMint semuenzaniso? nekuti haichashandi sepakutanga, ine zvikanganiso zvakawandisa
Iyo gumi yakanakisa kugovera ya10
Zvemukati mafirita uye kutonga kwevabereki kwekuparadzirwa kweGNU / Linux